Halkee ku been abuurtaa sharraxaadda SEO ee saxda ah, iyada oo tixgelinta Suuq-geynta Gaadiidka?
Waxaan badanaaba maqli karaa jawaabo waxtar leh oo ka imanaya hoggaamiyeyaal badan oo ganacsi iyo xitaa maamulayaal caqli badan oo caqli badan. Dhammaantood waxay ka cabanayaan inay ku wareersan yihiin shuruudaha Saamaynta Search Engine (SEM) iyo sharraxaad ku filan SEO. Xaqiiqdii, labada fikradoodba waa kuwo ballaaran oo halkan waxaa badanaa loo gudbiyaa iyadoo loo adeegsanayo ganacsatada warshadaha. Aan wajahayno - intooda badani way ka fogyihiin in ay dhab ahaantii sax yihiin, oo kaliya keena jahwareer badan.
Aynu aragnno ugu dambeyntii. Haa, Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO) iyo Suuq-geynta Mashiinka Raadinta (SEM) ayaa dhab ahaan lagu hagaajiyaa matoorada. Laakiin waxay samaynayaan laba siyaabood oo kala duwan, ugu yaraan isticmaalka labo eray oo kala duwan. Waxaan loola jeedaa, Suuq-geynta iyo Wax-ka-qabashada waxay leeyihiin qeexitaan aad u ballaran oo ballaadhan, maaha inay sheegaan codsigooda guud. Waxaan soo jeedinayaa raadinta liis kooban oo ka mid ah farqiga ugu muhiimsan ee u dhexeeya iyaga, si loo helo fahamka saxda ah ee SEM, oo dhammeystiran oo buuxa sharaxaad SEO ah.
Aan u helno qaab isku mid ah si aan u aragno farqiga hal mar. Bal qiyaas in Suuq-galka Dijital ah uu yahay baabuur. Hawlgallada saxda ah, gaarigaagu wuxuu u baahan yahay inuu si taxadar leh u daryeelo mishiintiisa, oo uu ku socdo ilaalinta, tusaale ahaan, shidaalka soo noqnoqda. Qaadashada tusaalooyinkani waxay noqon kartaa tusaaleyaal ahaan barta bilawga ah, waxaan ku sii socon karnaa isbarbardhig sahlan. Haa, isbarbardhigga daacadnimadu waa mid ka fog mid kasta oo fiiro gaar ah, laakiin waa inay sameeyaan, ugu yaraan hadda.
Hagaajinta dayactirka dayuuradda waxay la mid tahay habka Mashruuca Optimization Search. Waxay ka kooban tahay dhinacyo kala duwan, sida baarista cadaadiska, saliidda, heerarka biyaha, iyo sidoo kale ku lug leh shaqooyin kale oo badan oo kala duwan si ay u sii wadaan socodka shaqada. Si waxqabad fiican leh, marwalba waxaad heli kartaa qaybo dheeraad ah, ama waxaad bedeleysaa kuwa hadda jira. Sidaa darteed, waxaad ku gaari doontaa waayo-aragnimada darawalnimo ee ugu fiican maalin kasta. Tani waa waxa aan aaminsanahay in sharaxaadda SEO ugu fudud. Si aad u sameyso is-barbar dhigidkan xitaa kalsoonida, waxaan si sahlan u barbar dhigi karnaa arintaan dhabta ah ee raaxada lahaanshaha lahaanshaha ee baabuurta ay neceb tahay qaybta libaax ee darawalada, waxaan qirayaa.
Dhinaca kale, Suuq-geynta Macaamiilka ayaa la barbardhigi karaa baahida lama huraanka ah ee dib-u-dhiska ah gaaska cusub gaas cusub gawaarida gaaska. Qaadashada tixraaca hore ee masruufka qiimaha si siman u shaqeynaya sharaxaadda SEO sahlan, waxay u muuqataa in ku dhowaad wax kasta oo joogtayn iyo dayactir lagu shaqeyn karo laga yaabo in la yareeyo heerka aasaasiga ah. Sidaa oo kale (e. g. , adoo adeegsanaya bogga internetka oo kaliya dadaalka SEO-ga oo dhan), waxaad awood u leedahay in aad dib u dhigto kharashyada aadka u dheer ee dheeraadka ah, laakiin wali ha sii wadin gaadhigaaga, ugu yaraan heerka hoose ee hoose. Dhamaan shidaalka SMM, dhinaca kale, weli wali waa lagama maarmaan, sidaas awgeed ayaa ku hartay habka kaliya ee aad u isticmaali karto mootadaada, wadidaada adoo rabta iyo markaad u baahato wakhti kasta.
Labada SEO iyo SEM waxay ku shaqeeyaan isla beeraha. Waxaan ula jeedaa in badan oo soo booqda marti gelintaada internetka. Wixii sharaxaad SEO ah, sharraxsan websaydh wanaagsan oo la hagaajiyay iyo kor u qaadi doonaa tayada tayada organic dheeraad ah. Waa maal-gashi muddo dheer oo maalgashi ah, taas oo u xaqiijinaysa socodka deganaanshaha macaamiisha dhabta ah, oo markaa dakhliyada. SEM ku leexashada raadinta lacag-bixinta, dhanka kale, si joogto ah ayaa loo baahan yahay in lagu dallaco lacag caddaan ah. Gawaaridaada ayaa isla markiiba wadata, taas oo muujinaysa natiijooyin deg-deg ah, walow ayadaba Source .